I-china abakhiqizi bensimbi yensimbi ehlanganisiwe nabaphakeli | I-Shoufan Metal
I-Hot-dip galvanizing ukucwilisa ngesisombululo se-zinc esishisayo nesincibilikisiwe. Ijubane lokukhiqiza liyashesha, futhi ukumboza kukhulu. Ubuncane besembozo se-zinc esivunyelwe imakethe ngama-microns angama-45, kanti ubukhulu bungaba ngaphezu kwama-microns angama-300. Kumnyama ngombala, kudla i-zinc eningi ...
Lashukumisa Insimbi Yensimbi kufaka phakathi i-electro wire lashukumisa kanye nocingo olushubile olushisayo.
Zinc camera: 1. Electro lashukumisa yensimbi wire 15-20g / m2. 2. Hot ashiselwe yensimbi wire kuyinto 30-300g / m2
Hot-cwilisa galvanizingicwilisa ngesisombululo se-zinc esishisayo nesincibilikisiwe. Ijubane lokukhiqiza liyashesha, futhi ukumboza kukhulu. Ubuncane besembozo se-zinc esivunyelwe imakethe ngama-microns angama-45, kanti ubukhulu bungaba ngaphezu kwama-microns angama-300. Kumnyama ngombala, kudla i-zinc eningi, kwakha ungqimba lokungena ngensimbi eyisisekelo, futhi kunokumelana okuhle nokugqwala. I-Hot-dip galvanizing ingagcinwa amashumi eminyaka ezindaweni ezingaphandle.
Ukubumba okubandayo(i-galvanizing) inqubo lapho i-zinc ifakwa kancane kancane ebusweni bensimbi kubhavu we-galvanic. Ijubane lokukhiqiza lihamba kancane, ukumboza kufana, nobukhulu buncane, imvamisa ama-3-15 microns kuphela. Ngokuhlobene ne-hot-dip galvanizing, izindleko zokukhiqiza ze-electro-galvanizing ziphansi.
Izinto: ikhwalithi ephezulu yekhabhoni yensimbi yensimbi engu-Q195
isici: ukuguquguquka okuhle kakhulu nobumnene
isilinganiso se-zinc: 15g-250g / ㎡
amandla eqine: 30kg-70kg / ㎡
isilinganiso sokunweba: 10% -25%
isisindo / ikhoyili: 0.1kg-800kg / ikhoyili
I-Standard Gauge: BWG34 – BWG4 okungu-0.20mm – 4.0mm
Isisindo sekhoyili: ikhoyili yensimbi ehlanganisiwe ingahlangabezana nokufunwa kwamakhasimende, ikhoyili elincane nelikhulu liyatholakala.
Inhloso: ikakhulukazi yokwakha, ukuluka inetha, amabhulashi, imishini yokuxhumana, imishini yezokwelapha nezintambo, izihlungi, ipayipi elinengcindezi enkulu, imisebenzi yezandla neminye imikhakha
Isici nezicelo: Ukuphakama okuphezulu kwe-Zinc ukumelana nokugqwala okukhulu, okuqinile futhi okulinganiswe kahle kwe-Zinc Coating, indawo eshelelayo, esetshenziselwa ukwelukwa kocingo lwensimbi nokuphinda kwenziwe kabusha, okusetshenziswa kakhulu embonini, kwezolimo nasekuzalaneni kwesitoko.
Iphakheji: Ama-0.3-1000kg ayatholakala, ukupakisha kwangaphakathi ngemichilo ye-PVC, ukupakisha kwangaphandle ngendwangu ye-hessian noma isikhwama senayiloni ngaphandle.
Amandla eqine nendlela yokubala yocingo lwensimbi
Indawo yesiphambano se-Wire = m2 * 0.7854 mm2
Intambo yokuqhekeka kwentambo iNewton (N) / indawo yesiphambano mm2 = amandla MPa
Abanye osayizi nabo bangenziwa njengemfuneko yakho.
Langaphambilini Izintambo zocingo ezi-Torsionproof
Olandelayo: Intambo yensimbi ehlanganisiwe